केहि दिन अगाडी मात्र सुप्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरका देवता भीमसेनलाई पसिना आएको थियो : भीमसेनलाई पसिना आउदा : नेपालमा हुन्छ अनिष्ट ! – Ujyaalo Patrika
केहि दिन अगाडी मात्र सुप्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरका देवता भीमसेनलाई पसिना आएको थियो : भीमसेनलाई पसिना आउदा : नेपालमा हुन्छ अनिष्ट !
दोलखा : सुप्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरका देवता भीमसेनलाई १८ औं पटक पसिना आएको छ । भीमसेनलाई पसिना आउँदा देशमा अनिष्ट वा शुभ नहुने धार्मिक मान्यता रहँदै आएको छ । यस अघि २०७६ फागुन ८ गते १७ औं पटक भीमसेनलाई पसिना आएको थियो । गत वर्ष सवा घण्टासम्म पसिना आउँदा देशमा कोरोना भाइरसको महामारी भित्रिएको जनविश्वास रहँदै आएको छ ।
Previous डेढ वर्षसम्म दैनिक १८ देखि २० वटा रोटी खाँदा पनि दिसा नगरेका यी युवाको दिसा कहा गईरहेको छ ?
Next कुन देशका पुरुषको लि”ङ्ग कति लामो ? (२५ देशको सूचि सहित)